အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၁ ကိုထုတ်ပြန်… – PVTV Myanmar
· 12 months ago ·27 Comments
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၁ ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သလို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတဖွဲ့များနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၁ ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Like – 9.3K Share – 1498
​ေၾကာ္​ျငာ​ေပးတဲ့သူက CDM လုပ္​ထားတဲ့ MRTV က သတင္​း​ေၾကျငာသူ ကို ကသလ လား႐ွင္​။
2021-05-17 at 10:31 PM
တံဆိပ်မှာ ပါတဲ့ ခြေသေ့် ပုံ ဖြုတ်စေလိုပါသည်
မင်းတပ်အတွက် အလံဖြူထောင်နိုင်တဲ့ အရေးပေါ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းအမြန်ဆုံးဖွင့်ဖို့လိုအပ်နေ
မင်းတပ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သည် အကြမ်းဖက် စကစ ၏ အလွန်အကျွံအင်းအားသုံးဖြိုခွင်းမှုများကြောင့် ပြည်သူတွေအထိနာမှာစိုးပြီး နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ အခုလိုနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်သော်လည်း အကြမ်းဖက်စကစသည် တွေ့သမျှ လူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေ၊ ဖျက်စီးမြဲအတိုင်းဖျက်စီးနေတယ် လို့သိရပါတယ်။
မြို့ပေါ်က ၉၀% သောပြည်သူလူထုသည် တောထဲတောင်ထဲ အကာအကွယ်မဲ့ တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးနေကြရတယ်။
မြို့ပေါ်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတစ်ချို့လည်း ထွက်ပြေးလို့မရအောင် မြို့ပြင်ဘက်ကနေ စစ်တပ်တွေမှ လမ်းတွေပိတ်ပြီး စောင့်ကြပ်ထားတယ်။
တစ်ချို့က လမ်းမဟုတ်တဲ့​ ခြုံတောထဲကနေ တောထဲကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်။
၁။ အိမ်ထဲဝင်ပြီး ရှိသမျှပစ္စည်း၊ ချင်းရိုးရာပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတယ်၊
္္၂။ အဘိုးအဖွားတွေနဲ့အစောင့်တွေရှိတဲ့အိမ်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ ငွေ၊ လက်ဝတ်ရာတနာ၊ နားဂတ်၊ ဆွဲကြိုး၊ ဆိုင်ကယ် တွေ့သမျှအကုန်ယူတယ်။
၃။ ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကို လက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ တမင်ဖျက်စီးနေတယ်။
ယခု မင်းတပ်အတွက် အရေးပေါ်လိုအပ်တာ NGO/INGO/UN တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ အရေးပေါ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်း၊ စားနပ်ရိက္ခါတွေ အမြန်ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်​နေပါတယ်။
အကူအညီတွေ နောက် ၃ – ၄ အတွင်း မရဘူးဆိုရင် စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြောင့် သေတဲ့သူကသေ၊ အစာရေစာငတ်ပြတ်လို့၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရလို့ ဒုက္ခရောက်မည့် လူဦးရေး များလာမည့် အခြေအနေမှာရှိတယ်။
အဲဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် အလံဖြူ ထောင်နိုင်တဲ့ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းအမြန်ဆုံး ဖွင့်ဖို့လိုအပ်တယ်။ စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေအားဖြင့် ၃၀၀၀ – ၅၀၀၀ ကြားမှာရှိပါတယ်။ အမိုးမရှိ၊ အကာမရှိ၊ အခင်းမရှိ၊ ဒီအတိုင်း မြေကြီးပေါ်မှာပုဆိုးလေးခင်းပြီးအိပ်နေရတယ့်အခြေနေမှာရှိတယ်။ စားဝတ်နေရေးလည်းအခက်အခဲရှိတယ်။ တောထဲမှာခြင်ပေါတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျန်းမာရေးလည်း မကြာခင် ၃-၄-၅ ရက်အတွင်းမှာ အခြေနေဆိုးဝါးလာမည့် အခြေနေမှာရှိနေပါတယ်။
2021-05-17 at 11:35 PM
အပြစ်မဲ့ပြည်သူ​တွေ မတရားနှိပ်စက်ခံ​နေရတာ ​မြေပြင်မှာကာကွယ​်​ပေးမယ့်တရားဝင်း ပြည်သူ့ကာကွယ်​ရေးPDf
လေးစားပါတယ် အရေးတော်ပုံပြီးရင်ပိုကောင်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ဆောက်ကြတာပေါ့ သွေးချင်းညီနောင်အပေါင်းတို့
2021-05-18 at 12:21 AM
2021-05-18 at 12:26 AM
What’s going on at the UN? Ineffectual lobbying or Burma just not an important country?
In tightening the asset freeze and arms embargo established by that resolution, the Council this evening further detailed conditions for inspections of transport suspected to be violating the embargo, requesting States enforcing the embargo to coordinate closely with each other and the Secretary-General on the measures they were taking towards implementation.”
2021-05-18 at 12:51 AM
2021-05-18 at 1:10 AM
2021-05-18 at 3:57 AM
2021-05-18 at 5:30 AM
2021-05-18 at 5:46 AM
2021-05-18 at 6:28 AM
ဂုဏ်ယူကြိုးဆိုပါတယ် ပြည်သူကာကွယ်ရေ NUG
2021-05-18 at 8:15 AM
July Moe Set says:
2021-05-18 at 8:29 AM
2021-05-18 at 9:52 AM
မင်းတပ်အတွက် ကောင်းမွန်သောဆေးကုသမှုများရရှိရေးနဲ့ပြန်လည်ခုခံကာကွယ်ချေမှုန်းနိူင်ရန် တဘက်ရန်သူ့လက်နက်ထက်မလျှော့တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေအမြန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိူင်ပါစေ NUG မှတာဝန်ရှိသူအပေါင်းအားမေတ္တာရပ်ခံပါသည်🙇‍♀️😔💪
နိုင် တူး says:
ကို ထီး says:
2021-05-18 at 12:50 PM
2021-05-18 at 4:00 PM
2021-05-18 at 6:06 PM
တရားသောစစ် မုချအောင်ရမည် ။